Ny malaza ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2018 2:44 GMT
Tunizika, fandraketam-peo mozika Toniziana, namoaka ny andiany faha-14 tamin'ny fifangaroana Jazz, Blues, Rock ary Soul tamin'ny alalan'ny hira avy amin'i Mamdouh Bahri, Issam Mahfoudhi, le Ptypont ary Mawel.
Thysdrus manoratra momba ny sarimihetsika Toniziana Bab El Arch (Ny varavarana mankany amin'ny seza fiandrianana) novokarin'ilay tale Toniziana Mokhtar Laadjimi. Faritan'ny tale toy ny saga ho an'ny tanora mpanao gazety Toniziana iray izay tratra teo anelanelan'ny “famosirana ara-tsaina” sy “famosirana ara-pananahana” ary ny tolony amin'ny toe-draharaha ara-pianakaviana sy ara-tsosialy manempotra ny sarimihetsika.
Swifty indray manoratra momba ny mahatonga an'i Kanadà ho toerana lehibe faleha vaovao ho an'ny mpifindra monina Toniziana, ary manome lisitra mahaliana momba ny tombontsoa sy ny voka-dratsin'ny firenena avy amin'ny fomba fijery Toniziana.
MMM manoratra momba ny toetry ny sinema any Tonizia sy ny tsy fisian'izy ireo amin'ny lafiny rehetra amin'ny traikefa an-tsehatra. Heveriny fa tsy manana toerana ahafahan'ny olona miala voly i Tonizia, ary safidy lehibe ho an'ireo mpampiasa vola mba hitsofohany ny sehatra vaovao amin'ny sinemà.
Troubadour manoratra momba ny fomba nahitan'ny mpampiasa azy ny bilaoginy, izay anoratany indraindray momba ireo zavatra manahirana azy any am-piasana, ary ny nahatonga azy ho voaraoka noho izany. Mihevitra ny tokony hataony amin'izao fotoana izao izy, raha tokony hanohy ny bilaogy izy na tsia. Tapa-kevitra ny hanohy hanoratra izy nony farany.
Felsfa miresaka momba ny tanànan'i El Mellassine malaza any Tunis, sy ny fomba niovan'izany avy amin'ny ala mikitroky ny jiolahy izay lasa tsena ahitanao saika ny zava-drehetra amin'ny vidiny ambany.
Miresaka momba ireo jiolahy mifanaja avy amin'ny faritra samihafa ao Tonizia izy ary manoritsoritra ny firaisankinana eo amin'ireo andian-jiolahimboto ao amin'ny faritr'i Mellassine, izay mpivarotra any amin'ireny tsena ireny. Milaza tantara vitsy mahafinaritra sy traikefa avy eny an-tsena ihany koa izy.
Slaim kosa mihevitra fa tokony hanangana ny Faritrany Manokana Formule One i Tonizia. Mihevitra izy fa ho fampiasam-bola tsara amin'ny fizahantany izany mba hisarihana ireo mpankafy Formula One, indrindra fa i Tonizia no toerana tena akaiky avy any Eoropa.